ओली-माधव वार्ता अनिश्चित : प्रचण्ड-माधव वार्ता जारी ! - Kantipath.com
नेकपा एमालेभित्रको विवाद समाधान गर्ने प्रयासस्वरुप मङ्गलबार पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच भेटवार्ताको तयारी गरिएको छ । एमाले नेता सुवास नेम्वाङका अनुसार दुई नेताबीच आज भेटवार्ता गर्ने तय भए पनि समय र स्थान भने तय भइसकेको छैन । ओलीसँग भेटवार्ता इन्कार गर्दै आएका नेता नेपाल पछिल्लो समय वार्ताका लागि सहमत भएको दाबी नेताहरुले गरिरहेका थिए।
पछिल्लो समय ओली र नेपाल सार्वजनिक कार्यक्रममा एक अर्काप्रति आक्रामक देखिएपनि विघटित कार्यदलका सदस्यहरुसहित दोस्रो तहका नेताहरूले भने पार्टी एकताका लागि निरन्तर पहल जारी राखेका छन् ।
माधव नेपालले आफू पार्टी एकताकै पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका छन् । सोमबार राजधानीमा भएको आफू निकट स्थायी समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘कमरेडहरू सबैको एकताको भावनासँग मेरो पनि एकरूपता छ । त्यसैले मैले बारम्बार एकता हाम्रो इच्छा र चाहना हो भन्ने गरेको छु । सकेसम्म छिटो, सम्मानजनक र सुव्यवस्थित ढङ्गले एकता होस् भन्ने मेरो चाहना छ ।’
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच अहिले भेटवार्ता भइरहेको छ। कोटेश्वर खरिबोटस्थित माधवकुमार नेपाल निकट केन्द्रीय सदस्य पार्वती थापाको घरमा बिहान ९ बजेदेखि दाहाल–नेपाल वार्ता चलिरहेको हो।
एमालेको दुवै समूहका नेताहरुले माधव नेपाल र केपी ओलीको भेटवार्ता गराउने प्रयास गरिरहेका बेला दाहाल–नेपालबीच वार्ता चलेकाे हो। प्रचण्डले एमालेकाे माधव समूहलाई सरकारमा ल्याउने कसरत गरिरहेका छन् तर नेता नेपाल त्यसमा सहमत भैसकेका छैनन्। माधव समूहले सरकारमा जाने नजाने निर्णय लिन नसक्दा मन्त्रिपरिषद् बिस्तार हुन सकेको छैन। माधव समूह अनिर्णित हुँदा सत्ता गठबन्धनलाई मन्त्रालय भागबण्डा लगाउन सकस परिरहेको हो।
Previous Previous post: एमालेका सांसदलाई कारबाही भएपछि कर्णाली सरकार ढुक्क !
Next Next post: अपडेट : सिद्धबाबामा ढुङ्गा लागेर जिपका सहचालकको मृत्यु
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस : ढक-तराजुको प्रयोग र मूल्यमा असमानताका कारण ठगिँदै उपभोक्ता
संयुक्त तीनवटा संघसंस्थाको आयोजनामा असाहय र गरिबहरूलाई निशुल्क खाना खुवाइँदै